hoy ny filoha nasionalin’ny Asief Andrianarison Jean Aimé Botosera « John Love ». Tsy ny fikarakarana fifaninanana tompondakan’ny Asief ihany no himasoany, hoy izy fa ny fitaizam-batan’ny mpiasa tsy an-kijanona. Tamin’ny ankapobeny raha ny vokatra azo dia azo ambara fa nanjakan’ny ekipan’ny minisiteran’ny MDN tanteraka ity Jeux Corporatifs ity fa lasan’izy ireo ny amboara teo amin’ny taranja volley-ball nandreseny ny Senat seta 2-0. Lasany koa ny amboaran’ny lalao baolina kitra nandreseny ny Jirama 1-0. Mbola lasan-dry zareo ihany koa ny amboara teo amin’ny taranja tenisy rehefa nandresy ny MFB 5-4 ry zareo. Farany dia mbola lasan’ny MDN ihany koa ny amboaran’ny tenisy ambony latabatra isam-batan’olona sy isan-tarika. Nanaraka azy teo ny Jirama nahazo ny amboaran’ny basket-ball rehefa nandresy ny SANTE 33-24 ary koa ny amboaran’ny taranja tsipy kanetibe sy ny amboaran’ny Belote.